काठमाडौं । जुन समाजले नैतिकतालाई बिर्सिसक्यो, जुन समाजले आफ्नो सांस्कृतिक गरिमालाई बिर्सिसक्यो र जुन समाजले आफैँलाई पनि बिर्सिसक्यो त्यसलाई शुभकानमा दिन म उत्ताउलिएको छु । म दुवै हात जोल्ठ्याएर कुकर्मीहरूलाई, भाँडहरूलाई र दुष्टहरूलाई नमस्कार गर्छु र दस दाह्रा ङिच्याउँदै चिच्याउँछु— यस वर्षको पवित्र गुपूर्णिमाले यहाँहरूलाई अझ ढड्याओस् अनि अरू नयाँनयाँ गोप्य र काला कुकर्महरूबाट तपाईँहरूको झन्झन् भलो हुँदै जाओस् । झन्झन् सफल होस् कालाबजारेहरूको, चोरहरूको, ठग र धूर्तहरूको अनि उछित्तो पल्टँदै रहोस् मजस्ता निम्न मध्यमवर्गीय शिक्षकहरूको, लेखकहरूको, निमुखा जनताको । बिल्लिबाठ हुँदै जाओस् सधैँ झैँ सोझासाझाहरूको, इमानदारहरूको र कामदारहरूको । भर्सेलै परोस् न्यायको, सत्यको र मानवताको ।
उठीबास होस् तर्कशीलताको, प्रामाणिकताको र प्रज्ञाको । कीरैसरि मौलाऊन् ढाँटहरू, बेइमानहरू र कामचोरहरू । मेरो अँजुलीभरिभरिको शुभकामना छ घुस्याहाहरूलाई, चोरहरूलाई र कर्तव्यच्यूतहरूलाई । वन्दना छ, नमस्कार छ र शुभेच्छा छ मेरा आँखाभरिभरिको धोका दिएर रमाउनेहरूलाई, मुटुका खेलाडीहरूलाई र शरीरका व्यापारीहरूलाई ।
आजको शुभ र शुभ बिहानी हेर्नोस् भ्रष्ट व्यक्तिहरू हो, हिमाल पनि सारा दाँतका लहर देखाई मुस्काइरहेको छ । हरिया रूखहरू सस्याना र कमलाकमल मुना र पाउला फर्फराउँदै सुगन्धित फूलहरूमा मग्मगाइरहेका छन् । कोइलीहरू पनि पाँचै स्वर निकालेर शुभकामना चढाइरहेका छन् । नदीहरू पनि आफ्ना सङ्ला शाखाहरू सोहोरेर तपाईँहरूलाई नै कलकल गर्दै बोलाइरहेका छन् । चाहे तपार्इँ भ्रष्टहरू चराचुरुङ्गीको चिर्बिर सुन्नोस्, चाहे वायुको फर्फर सुन्नोस्, तपाईँहरूकै शुभकामना आकाशभरिभरि झङ्कृत भइरहेको छ । ए समाजका कलङ्कहरू हो, कान खोलेर सुन्नुहोस्, पट्टाइ लाग्ने गरेर कागहरू पनि, चीलहरू पनि र गिद्धहरू पनि तपाईँहरूको प्रत्यक्ष भलो चिताइरहेका छन्, गुणगान गरिरहेका छन् तथा कीर्तिको उपासनालाई चुच्चाले ओसारिरहेका छन् ।
तपाईंहरू समाजका ठेकेदार हुनुहुन्छ, जिम्मेवार हुनुहुन्छ र राष्ट्रिय आयका प्रमुख हिस्सेदार हुनुहुन्छ । हामी जनता सिनु हौँ, तपाईँहरू ब्वाँसा हुनुहुन्छ, स्याल हुनुहुन्छ र गिद्ध हुनुहुन्छ । कुन मूर्ख होला जो दुईचार अक्षर पढेर पनि सिनुलाई शुभकामना देला ? म त घोक्रो सुकुन्जेल, आन्द्रा बटारिउन्जेल र कन्चट रन्कुन्जेल आजको यस पवित्र दिनमा कराउँछु— जय होस् स्यालहरूको, छलीहरूको, कपटीहरूको ! जय होस् ब्बाँसाहरूको, लुच्चाहरूको, छुच्चाहरूको ! जय होस् गिद्धहरूको, घुस्याहाहरूको, चुसाहाहरूको !
शुभकामनाको बाढी कोसी र कर्णाली, भेरी र गण्डकीमा उर्लेको छ प्रतिज्ञा बिर्सनेहरूलाई, शुभकामना बागमती र सेती, मेची महाकालीमा छचल्केको छ साथी बिर्सनेहरूलाई । म किन नदिऊँ शुभकामना ठूलाठालुहरूलाई, बाघभालुहरूलाई र बुद्धिका आलुहरूलाई ? सम्पूर्ण जुकाहरूलाई शुभकामना छ मेरो, सम्पूर्ण हृदयहीनहरूलाई शुभकामना छ मेरो अनि सम्पूर्ण कुरौटे, भरौटे र लबस्तराहरूलाई शुभकामना छ मेरो । टिठ पल्हाउँछ मेरो छातीमा ती इमानदार लेखकहरूप्रति जो आफ्ना पाठकहरूलाई साँचो बोल्ने, न्याय माग्ने र सद्भावनाको बाटो अँगाल्ने अनुरोध गर्छन् । असाध्य दयनीय हुन् ती बाबुआमाहरू जो आफ्ना कल्कलाउँदा छोराछोरीमाथि प्रेमका, इमानको र नैतिकताको छाप पार्न खोज्छन् ।
तिहुन चाखेर मोज लुट्नेहरू, झुक्क्याएर पैसा सोहोर्नेहरू र प्रेमीप्रेमिका हप्तैपिच्छे फेर्नेहरू, यो धन्यवादका पात्र छन्, शुभकामनाका पात्र छन् । जीवनको रस चाखे तिनले, महत्व जाने तिनले र सफलताको ढोका खोले तिनले । तिनीहरूलाई मेरो ह्याकुलाभरिभरि सलाम छ, मथिङ्गल भरिभरिको प्रणाम छ ।
कस्ता मरन्च्याँसे, हुतीहारा र सोझा छन् मेरा सहकर्मी शिक्षकशिक्षिकाहरू जो अझै चाकरी, चुक्ली र चिप्ल्याइँ नसिकाएर, धोका, ठगी र कालो व्यापार नसिकाएर तथा घूस खाँदै संस्थाहरूको र सर्कारी कार्यालयहरूको हिसाब हिनामिना गर्ने र पैसा कमाउने पाठ नपढाएर साहित्य पो सिकाउँछन्, विज्ञान सिकाउँछन् र अनुसन्धान सिकाउँछन् । जससित पैसो छ उसले घुमाउने घर बनाउन सक्छ, गाडीमा घुमाउन सक्छ र उच्च कर्मचारीहरूलाई निम्त्याएर रक्सीले झुमेका बेला लाखौँको र अचेल ता करोडौँको व्यवस्था गर्न सक्छ । उसले मखमली कागतमा शुभकामनाका सुनौलो अक्षर नग्न वेश्याका पुष्ट वक्षस्थल, उचालिएको नितम्ब र लोलाएका आँखा पृष्ठभूमि अङ्कित गर्नसक्छ र मनको सारा तीतो लुकाएर साथीहरूलाई पठाउन सक्छ ।
उसले आफ्नी प्रेमिकालाई सम्पूर्ण हिमाली कस्तुरीको रस निचोरेर बनाएको सुगन्धमा डुबाएको शुभकामनापत्र पठाउन सक्छ र उसकी प्रेमिका चाहिँ त्यसको वासनामा लट्ठिँदै छिमेकको भुस्तिघ्रे नोकरलाई सुटुक्क कोठाभित्र हुल्न सक्छे, उसका अगाडि आफ्ना तिर्खालु शरीर तेस्र्याउन सक्छे । ए सेठ साहूका पत्नी, प्रेमिका र पुत्रीहरू हो, शुभकामना छ तपाईंहरूका हृदयहीनतालाई र तपाईंहरूका चोरी दाउमा पल्केका बैंसलाई ! पढ्नु नै किन पर्‍यो थोत्रा महाविद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा ? पढेर लछार्पाटो कसले के लगायो यस समाजमा ? ज्ञानका सूत्रमा गिदी पगाल्दै यौवनका रसिला दिन छर्लंग कटाएर सुक्खो जीवन बिताउने मूर्खहरूलाई धिक्कार छ यस पवित्र दिनमा । तिहुन चाखेर मोज लुट्नेहरू, झुक्याएर पैसा सोहोर्नेहरू र प्रेमीप्रेमिका हप्तैपिच्छे फेर्नेहरू पो धन्यवादका पात्र छन्, शुभकामनाका पात्र छन् । जीवनको रस चाखे तिनले, महत्व जाने तिनले र सफलताको ढोका खोले तिनले । तिनीहरूलाई मेरो ह्याकुलाभरिभरि सलाम छ, मथिङ्गल भरिभरिको प्रणाम छ ।
मेरा नसानसामा सल्बलाउने रगत भन्छ— अध्ययन र लेखनमा लागेर जीवन बर्बाद गरेँछु मैले, जीवनलाई पाएर पनि छताछुल्ल पारेँछु मैले । त्यसैले ए जाली, फटाहाहरू हो ! हाम्रो समाजमा रहेका एकदुई असल गुणलाई, एकदुई इमानका बिउलाई, एकदुई सतीत्वलाई पनि एक ठाउँमा थुपारेर सल्काइदिऔं, यस पुण्य पर्वमा र आकाश थर्काउँदै एक्कै चोटि फलाको उरालौं— आँखाभरिभरिको शुभकामना छ बेइमानहरूलाई !!